Indostrian'ny bateria China sy ny fitaovana simika hafa ampiasaina amin'ny ozinina sy mpamokatra Jet Mill-bed fandriana | Qiangdi
Ny milina pneumatika fandriana voarindra dia ny fitaovana ampiasaina hanorotoroana ireo fitaovana maina hanamafisana ny vovo-tany, miaraka amin'ny rafitra fototra toy izao:
Ny vokatra dia pulverizer fandriana mihena miaraka amin'ny rivotra famatrarana ho mpanelanelana. Ny vatan'ny fikosoham-bary dia mizara ho fizarana 3, dia ny faritra fanorotoroana, ny faritra fandefasana ary ny faritra naoty. Ny Grading Area dia omena ny kodiarana fitetezana, ary ny haingam-pandeha dia azo ahitsy amin'ny mpanova. Ny efitrano fanorotoroana dia misy ny bontolo fanosotra, mpamatsy sakafo sns. Ny kapila famatsian-tompo tompoko ivelan'ny vatom-panosehana dia mifandraika amin'ny tsindry fanorotoro.
Ny pulverizer pneumatika dia misy ny compressor-n'ny rivotra, ny mpamerina ny solika, ny tobin-tsolika, ny fanamainana mangatsiaka, ny sivana amin'ny rivotra, ny pulverizer pneumatic fandriana miorina amin'ny rano, ny mpizarazara amin'ny cyclone, ny mpanangona, ny rivotra miditra ary ny hafa.
Ny fametahana keramika sy ny fonosana pu amin'ny faritry ny fikosoham-bary rehetra mifandraika amin'ny vokatra mba hialana amin'ny famafazana vy dia mitarika ny vokadratsin'ny vokatra terminal.
4.Energy-effective: Mitsitsy 30% -40% raha ampitahaina amin'ny pulverizers pneumatic rivotra hafa.
Ny entona 5.Inert dia azo ampiasaina ho haino aman-jery ho an'ny fanotoana fitaovana mora mirehitra sy mipoaka.
6. Torotoro ny rafitra iray manontolo, ambany ny vovoka, ambany ny tabataba, madio ny fizotry ny famokarana ary fiarovana ny tontolo iainana.
7. Ny rafitra dia mampiasa fanaraha-maso efijery manan-tsaina, fandidiana mora ary fanaraha-maso marina.
8. Firafitra matevina: ny efitranon'ilay masinina lehibe dia manamboatra ny faribolana mihidy ho fanorotoroana.
Tsindry miasa (Mpa)
Fanjifana rivotra (m3/ min)
Ny savaivon'ny fitaovam-pisakafoanana (harato)
Fahamendrehana fanorotoroana (d97μm)
Fahafahana (kg / h)
Hery napetraka (kw)
Ny savaivon'ireo sombin-tsakafo
Diameter an'ireo sombin-javatra nesorina
Fivoahana（kg / h）
Teo aloha: Ampiasaina any amin'ny laboratoara Jet Mill-fandriana Jet Mill ho an'ny fahaiza-manao 1-10kg
Manaraka: Nitrogen Protection Jet Mill System Ho an'ny fitaovana manokana